Ị kwụsịrị data na gị iPad n'ihi na ọ wee banye mgbake mode na ị na weghachite? Ma ọ bụ i accidently ehichapụ ụfọdụ ihe photos, videos, ma ọ bụ kọntaktị na gị iPad (iOS 9)? Nọgidenụ na-Chiefs on. Mgbe ọ bụla ị na-ahụ na ị na-efu ụfọdụ dị mkpa data na gị iPad, e nwere ohere ka i nweta ha azụ ma ọ bụrụ na ị na-agbalị na iPad mgbake software - Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone data mgbake).
Mgbe ọ bụla ị na-ahụ na ị na-efu ma ọ bụ na-ehichapụ ụfọdụ data na gị iPad (iOS 9 akwado), biko kwụsị iji gị iPad ozugbo. Na oge ị na ihichapụ faịlụ gị iPad, ndị a faịlụ agaghị akwụsị ozugbo, ma anọ na gị iPad,-eche ka a overwritten site ọhụrụ data. Ọ bụrụ na ị na-anọgide na-eji gị iPad, mgbe ahụ, ọ bụ nnọọ o yikarịrị ka ị ga-eme ndị a na-ehichapụ faịlụ ruo mgbe ebighị ebi. Na na nke ọzọ, chọta a na kọmputa dị nso na-eso otu n'ime ụzọ n'okpuru naghachi furu efu data si iPad.
iPad Data Recovery - Naghachi Lost / ehichapụ Photos, Videos, Ndi ana-akpo, na-ekwu si iPad
Akwado multiple iPads: niile iPads dị ka iPad Air, iPad Obere, The New iPad, iPad 2, iPad 1 na ndị ọzọ;
3 mgbake ụdịdị: Naghachi data si iPad ozugbo, iTunes na iCloud ndabere faịlụ;
Save natara ozi, ndetu, na kọntaktị ozugbo na iPad;
3 Solutions iji weghachite ehichapụ / Lost Data si iPad na iPad Data Recovery Ngwá Ọrụ
Wondershare Dr.Fone Maka iOS-enye gị 3 mgbake ụdịdị iji weghachite ehichapụ ọ bụ furu efu photos, videso, kọntaktị, na ndị ọzọ na iPad. Ị dị nnọọ mkpa ibudata Wondershare Dr.Fone maka iOS (Windows) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac) na kọmputa gị na-eso otu n'ime ndị na-esonụ ngwọta na-ịmụta otú iji a iPad data mgbake software (maka iOS 9).
1: naputa site na iTunes
2: naputa site na iCloud
3: naputa site na iPad
Ngwọta 1: Naghachi ehichapụ iPad Data site iTunes ndabere
Ọ bụrụ na ị kwadoo gị iPad ka iTunes tupu adịkwa ma ọ bụ ihichapụ faịlụ, mgbe ahụ, otú a bụ ihe kasị mma nhọrọ maka gị na-agbake furu efu data si iPad (iOS 9 dị).
Nzọụkwụ 1 Họrọ iPad ndabere ka ike iṅomi
Ahọrọ "Iweghachite si iTunes ndabere faịlụ" mode n'elu nke mpio ahụ, na ihe niile iDevice backups ga-gosiri n'ebe a. Ị na mkpa ịhọrọ ndabere gị iPad na pịa na gaba "Malite iṅomi".
Ebe a niile faịlụ na iTunes ndabere faịlụ e ota n'ime Atiya na egosipụta, na i nwere ike ịhụchalụ na ego ha otu otu. Mgbe previu, ego ndị ị chọrọ azụ na pịa "Naghachi". Right ugbu a, mgbe ị na-agbalị naghachi ehichapụ ọ bụ furu efu ederede ozi, ndetu na kọntaktị site na iPad, a ga-enwe abụọ nhọrọ: Naghachi ka Ngwaọrụ na-agbake ka Computer. Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe ndị data azụ gị iPad, mgbe ahụ họrọ 'Naghachi ka Ngwaọrụ'. N'ihi na ụdị faịlụ ndị ọzọ, ị pụrụ nanị naghachi ha gị na kọmputa.
Ngwọta 2: weghachite ehichapụ iPad Data site iCloud ndabere
Pịa naputa site na iCloud ndabere File n'elu nke usoro ihe omume si window. Mgbe ahụ abanye na gị iCloud akaụntụ. Mgbe ahụ, na-ahọrọ nkwado ndabere na mpaghara faịlụ ịchọrọ ibudata ya. Ịzọpụta gị oge, na ọhụrụ mmapụta, ego gị mkpa faịlụ na ụdị ibudata. Ị maara, iCloud ndabere faịlụ bụ nnọọ nnukwu. Site na-ahọpụta faịlụ ụdị ibudata, ọ ga-belata oge na emefu na nbudata usoro.
Ozugbo Doppler akwụsị, ị nwere ike ihuchalu niile Egwute faịlụ na iCloud ndabere faịlụ. Họrọ faịlụ gị mkpa ma ịhụchalụ ha. Mgbe ị na-ahụ ndị a faịlụ gị mkpa, pịa Naghachi na-azọpụta ha na kọmputa gị. Dị ka ndetu, na kọntaktị na ozi, ị nwere ike naghachi ha ka ha kọmputa gị ma ọ naghachi ha azụ gị iPad. Ọ dịzịrị gị.
Ngwọta 3: Kpọmkwem Naghachi ehichapụ Data si iPad
Nzọụkwụ 1 Find ehichapụ data on iPad
Ka malitere, jikọọ gị iPad (iOS 9 akwado) gị na kọmputa. Mgbe ahụ na-agba ọsọ Wondershare Dr.Fone maka iOS na pịa na Malite iṅomi button-idem ke window ike iṅomi gị iPad. Akwụpụla gị iPhone n'oge scanning usoro.
Cheta na: N'ihi na iPad 1 ọrụ, ị nwekwara ike ịgbanwee gaa na ihe Advanced Mode site bọtịnụ na ala-nri akuku. Ọ bụ mma maka agbake media ọdịnaya. Right now, na-agbake photos kpọmkwem site iPad Obere, iPad, 2, iPad Air, na ọhụrụ iPad ụdị na-adịghị akwado ma. Na nke a, i nwere ike ịgbalị ngwọta 1 na ngwọta 2 iji weghachite photos n'ihi na gị iPad.
Mgbe iṅomi zuru ezu, ị nwere ike pịa ekpe faịlụ Atiya ka ịhụchalụ niile nke hụrụ faịlụ otu otu. Mgbe ahụ selectively naghachi ihe ị chọrọ na pịa Naghachi na-azọpụta ha ka gị na kọmputa ma ọ bụ iPad. Ugbu a nanị ndetu, ozi ederede, na kọntaktị a pụrụ ịzọpụta gị iPad ọzọ.
Hot Isiokwu maka iOS 8 Upgrading I nwere ike
5 Atụmatụ ime tupu iOS 9/8 ọjọọ
Update iOS 9/8 on iPhone / iPad / iPod aka
Ndabere iPhone tupu iOS 9/8 ọjọọ
Best 15 ngwa ọdịnala n'ihi iDevice agba ọsọ iOS 9/8
Adị n'elu Your iPhone na-agba ọsọ iOS 9/8 Faster
Nyefee Old iPhone ka iPhone 6
3 Ụzọ Nyefee Photos si iPad ka iMac
> Resource> iPad> iPad Iweghachite: Naghachi Lost Photos, Videos, ana-akpo & Notes si iPad